HTML နဲ့ CSS Myanmar e-book — MYSTERY ZILLION
မူလ › Web Development › HTML / CSS
HTML နဲ့ CSS Myanmar e-book
September 2010 edited May 2011 in HTML / CSS
အင်တာနက်ပေါ်က Web Page တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီး တည်ဆောက်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြရင်း အခြေခံအကျ ဆုံး HTML, CSS Programming စာအုပ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာအရေအတွက် :- ၁၉၇ မျက်နှာ ရှိပြီး အခြေခံကျတဲ့ HTML နှင့် CSS ကိုတွဲကာ Web page တစ်ခု တည်ဆောက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖော််ပြထားပါတယ်။
Zu Zu Aung
September 2010 edited September 2010 Registered Users
ဖတ်နေရင်းနဲ ့တတ်ပြီး လာ Thanks တာ ဟီး
September 2010 edited September 2010 Moderators
tag တွေတော်တော်စုံတယ်ဗျ မိုက်တယ်
Thanksalot bro ,This is very useful for me.Could you tell me other website which teach about HTML and CSS like W3School.com?
အပေါ်က Download Link နှစ်ခုလုံးမှာ File တွေ Crash ဖြစ်နေတယ်ကော? ပြန် Check ပေးပါအုံး ..
September 2010 edited September 2010 Registered Users, Moderators
T.K wrote: »
Site မှာ ကျွန်တော် ပြန်လည်ပြီး download လုပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်တာတော့ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
ပြန်လည်း ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး... အကယ်၍ မရသေးဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် reload ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်..
brb_1984 wrote: »
ကျွန်တော် ဒေါင်းတာ IDM နဲ့တောင် 36kb ပဲရှိတယ်။ ဖွင့်ကြည့်တော့ File crash တဲ့ .. ကောင်းရော်နော်..
ကြည့်ရတာ ဖတ်ဖို့ ကံမပါဘူးနဲ့တူတယ်.. ဟီးး
နောက်တာပါ .. worldwidemyanmar မှာ နည်းနည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်.. ကျေးဇူး အစ်ကိုရေ
www.worldwidemyanmar.com မှာပဲ သွားဆွဲလိုက်တာ ..
အခုလို share လုပ်တာ ကျေးဇူးတင်တယ်ကော? အဟတ်
ဟုတ်ကဲ့...ကျေးဇူးပဲ..တကယ်ကို အသေးစိတ်ရေးထားတာပဲ.. နောက်များလည်း ၇ှိရင်တင်ပေးပါဦးဗျာ
May 2011 Registered Users
Thanks brother .I'm finding this book so long/
I can't download anymore cozs there's should be error something like called 404 server not found.
May 2011 Administrators
Please, check again. It's working fine for me.
nice book ,thank bro!
June 2011 Registered Users
အကိုရယ်..ကူညီပါဦးဗျာ ကျနော်လည်းလေ့လာကြည့်ချင်လို့ပါဗျာ..ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့မရဘူး 404 server not found ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်..ဘာလို့လဲ တချက်လောက်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါဦး..ဖတ်ရမဲ့ကံမပါဘူးနဲ့တူတယ်... :-(
June 2011 edited June 2011 Registered Users
အဲ့ဒီ link ကဒေါင်းလို့ ၇တယ်ခင်ဗျာ။ မ၇ ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းဗျာ။
အူး...တော်တော်တိုင်ပတ်သွားတယ် အကိုတို့ရယ် မူးချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ်...ရသွားပါပြီဗျာ တော်တော်လေးကိုအသေးစိတ်လုပ်ထားတာပဲ..နောက်ရှိရင်လည်းတင်ပေးကြပါနော်.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အားလုံးကို..
June 2011 Moderators
July 2011 Registered Users
Oh now I get from ifile ... Thanks
August 2011 Registered Users
www.worldwidemyanmar.com link not working
download from ifile.it
ifile.it is working ,thanks mate ,
May 2012 Registered Users
ifile and worldwide myanmar cann't download files.
pls share another link.
all link not working....
please i really want to read it..................
May 2012 edited May 2012 Registered Users
ကျွန်တော်ဆိုရင် css /htmlတို ့ကို ကိုစေတန်စာအုပ်ကလေ့လာဖြစ်တာ
cssဆို လည်းတစ်ယောက်နဲ ့တစ်ယောက်ရေပုံခြင်းမတူကြဘူး
ကိုဖို းလပြည်လည်းတစ်မျိုးကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကကိုစေတန်စာအုပ်ကိုဖို ကြိုက်တယ်
http://cl.ly/9Asg (HTML by Saturngod)
October 2012 Registered Users
html နဲ့ css ebook ပြန်တင်ပေးကြပါဗျာ ဒေါင်းမရလို့ပါ ကျေးဇူးပါ
pls reload this book.can not download.thx
May 2015 Registered Users
May 2015 Administrators
For HTML and CSS , you can read at
For offline book for mobile , you can download at
Thanked by 1 NaingArkar
March 2016 Registered Users
I like Ko Saturn's Book,more than it
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကျော်လောက်က Windows App တွေရေးရင်း Web ကို စရေးဖို့ ကြိုးစားတုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ပထမဦးဆုံး HTML & CSS စာအုပ်ပါ။ ကိုစေတန် ကို ကျေးဇူး အလွန်တင်ပါတယ်။
Thanked by 1 saturngod
August 2016 Registered Users
It shows 404 error. Please recheck it.
August 2016 Administrators
is working fine
Thanked by 1 minntun